Namuhla ngaphezu kwesigamu seTsonga singamabandla angamaKristu, ikakhulukazi amaChristian Independent noma i-Evangelical Presbyterian Church (owayengumSwitzerland Mission). UbuKristu buyakhanga inani elikhulayo labathintekayo phakathi kwabafundi emadolobheni, kodwa ezindaweni zasemakhaya izinkolelo zendabuko zisenamandla kakhulu. Ngokuvamile abantu abaningi baseTsonga babakholelwa ukuthi kukhona umuntu ophakeme, okudalwe ukuthi kudalwa umuntu nomhlaba.
Izinkolelo zeTsonga zikholelwa ekukhulekeleni ukhokho. Bakholelwa ukuthi umuntu unomzimba womzimba (mmiri), nomzimba ongokomoya onemfanelo emibili, umoya kanye ne-ndzuti. I-moya (ehlobene nomoya) ingena emzimbeni lapho izalwa, futhi ekufeni kukhishwa ukujoyina okhokho.
I-ndzu ihlanganiswa nesithunzi somuntu futhi ibonisa izici zesintu - yilokho 'umuntu ongencibilika' oshiya umzimba emzimbeni womoya. Umoya wabafileyo (swikwembu) ugcwele izici zomuntu ngamunye nezomuntu womuntu. Akukhona nje kuphela ukuthi kukhona ukuphila ngemva kokufa, kepha uma ungena ezweni labafileyo umuntu ugcina izixhumanisi nabaphilayo. Kubantu abaningi baseTsonga namuhla 'umphakathi' usho into ebandakanya konke, kuhlanganise kokubili abaphilayo nabafileyo.
Ukuze kunciphise ukungena komoya womuntu osanda kufakwa abe yizinkambiso zokhokho, umkhosi wokwamukela wenziwa ngemva nje komngcwabo. Ukushona kwelungu lomuthi kubangelwa ukuthi zonke izihlobo zibe yimizila engcolile nokuhlanza ezenziwa ngezikhathi ezahlukene zosuku ezinyangeni ezimbalwa.
Ukukhulekelwa kuka-Ancestor, okwamanje okwenziwa namuhla, kudinga ukusebenza kwemikhuba, ikakhulukazi ngesikhathi sezinkinga, ngaphansi kokuqondiswa kwezwe (ukubhula). Umndeni ubuthana kwi-gandzelo (ukubeka eceleni imikhuba nemihlatshelo) ukukhothamela imikhosi yabo. Ukudla nokuphuza kufakwe emhlatshelweni okhokho abavame ukubonga ngokuhlinzeka abantu.
Izicelo zenzelwe ukuncenga kwabo ngezinkinga ezithile futhi ngezikhathi zenkinga. Imimoya yama-Ancestral nayo ingasondelwa ngokungakahleleki futhi ngaphandle kwemikhosi yomhlatshelo, ngomthandazo. I-Tsonga nayo ikholelwa emimoya emihle kanye embi. Imimoya emihle iletha imvula futhi yenza okuhle kwenzeke. Imimoya emibi (buloyi) isetshenziselwa abatshakathi (baloyi) abangakwazi ukulimaza umphakathi.
Umlumbi angase azi ukuthi umoya omubi uqobo ngaphakathi kwakhe futhi awusebenzise kahle, kepha ngokuvamile u-buloyi unomuntu ovamile ngaphandle kokuqaphela, futhi ushiye isidumbu sakhe ebusuku uma elele. Ukuba khona kwe-baloyi kuvame ukuhambisana nokugula okuphikisanayo nenhlanhla. Ukugula okwezinye izikhathi kuyakwamukelwa njengengxenye yemvelo yokuphila, futhi abaningi baseTsonga bakholelwa ukuthi umuntu ogulayo uyoziphulukisa ngokwesikhashana.
Ukuvuselelwa kungasheshiswa ngokusebenzisa izidakamizwa zokwelashwa ezilawulwa ngamalungu alwazi omkhaya. Kodwa-ke, uma ukugula kunzima kakhulu noma umjikelezo wenhlanhla uphikelela, kubonisa ukungenelela kwemimoya emibi futhi ukwelashwa kufanele kutholakale ngokubhula. Ukuhlukaniswa kwe-buloyi kwenziwa yi-analo noma i-mungoma, ehlola okhokho ngamathambo, amagobolondo nezinye izinto zokufakelwa (tinholo noma mavula). I-tinholo iphonswa njengedayisi phezu kombhede ovela kwisitsha; kuye ngokuthi izikhundla abahlala kuzo, umbhuli unquma imbangela yalesi sifo kanye nesenzo sokulungisa.